အယ်လ်ဇိုင်းမားမူးယစ် (အေဒီမူးယစ်) ကိုယ်စားလှယ်လောင်း: J147, CMS121, CAD31
/ဘ‌‌လော့ခ်/J147/အယ်လ်ဇိုင်းမားမူးယစ် (အေဒီမူးယစ်) ကိုယ်စားလှယ်လောင်း: J147, CMS121, CAD31
အပေါ် Posted 07 / 10 / 2018 by 阿斯劳 ရေးသားခဲ့သည် J147.
အယ်လ်ဇိုင်းမားနှင့် Geroprotectors (GNPs) ဆိုတာဘာလဲ
အယ်လ်ဇိုင်းမား, စိတ်ဖောက်ပြန်၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းအရင်းမှတ်ဉာဏ်, စဉ်းစားတွေးခေါ်နဲ့အပြုအမူနှင့်အတူပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင့်စိတ်ဖောက်ပြန်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာများပုံမှန်အားဖြင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုမိုဆိုးရွားရနေ့စဉ်အလုပ်များနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပြင်းထန်ဖြစ်လာ။အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ စိတ်ဖောက်ပြန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ 60 ရာခိုင်နှုန်း 80 ရာခိုင်နှုန်းအကောင့်အသစ်များ၏။ အဟောင်းအသက်အရွယ်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ (အေဒီ) နှင့်ကင်ဆာအပါအဝင်များစွာသောရောဂါများအတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးစွန့်စားမှုအချက်ဖြစ်ပါသည်။
Geroprotectors ကြောင့်အိုမင်းမှုနဲ့အသက်အရွယ်-related ရောဂါများအမြစ်အကြောင်းမရှိထိခိုက်စေခြင်း, အရှင်တိရိစ္ဆာန်များ၏သက်တမ်းရှည်အောင်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်တစ်ဦး senotherapeutic ဖြစ်ပါတယ်။ နယူး Salk သုတေသနယခုဤဓာတုဒြပ်ပေါင်းများ၏ထူးခြားတဲ့ subclass ဖော်ထုတ်အေဒီမူးယစ်ဆေးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသောဟုအမည်ပေးထားသည့် geroneuroprotectors (GNPs), နှင့်ကြွက်တွေမှာအိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနှေးကွေးစေခဲ့သည်။
သုတေသီများကအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါတစ်ခုတည်းအကြောင်းမရှိမရှိယုံကြည်ပါတယ်။ သင်ဘယ်လိုအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါရပါသလဲ? ဒီရောဂါဖြစ်နိုင်ဖွယ်ထိုကဲ့သို့သောမျိုးရိုးဗီဇ, လူနေမှုပုံစံစတဲ့နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်မျိုးစုံအချက်များမှဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အယ်လ်ဇိုင်းမားမှုအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေသည်ဟုအချက်များဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အခြို့သောစွန့်စားမှုအချက်များနေစဉ် - အသက်အရွယ်, မိသားစုသမိုင်းနှင့်မျိုးရိုးအလိုက် - မပြောင်းနိုင်, ထွန်းသစ်စသက်သေအထောက်အထားကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းမိုးနိုင်သည်ကိုအခြားအချက်များရှိစခွေငျးငှါအကြံပြုထားသည်။
အယ်လ်ဇိုင်းမားများအတွက်အကြီးမားဆုံးသောလူသိများအန္တရာယ်အချက်အသက်အရွယ်တိုးပွားလာနေသည်, ဒါပေမယ့်အယ်လ်ဇိုင်းမားအိုမင်း၏ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်အန္တရာယ်တိုးပွါးနေစဉ်, ကအယ်လ်ဇိုင်းမားတစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်အကြောင်းမရှိဘူး။
ရောဂါနှင့်အတူအများစုမှာတစ်ဦးချင်းစီ 65 နှင့်အထက်ရှိပါတယ်။ အသက်အရွယ် 65 ပြီးနောက်, အယ်လ်ဇိုင်းမားမှုအန္တရာယ်ကိုတိုင်းငါးနှစ်အတွင်းနှစ်ဆ။ အသက်အရွယ် 85 ပြီးနောက်, အန္တရာယ်နီးပါးသုံးပုံတစ်ပုံအထိရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
နောက်ထပ်ခိုင်မာတဲ့အန္တရာယ်အချက်မိသားစုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လ်ဇိုင်းမားနှင့်အတူမိဘတစ်ဦး, အစ်ကိုသို့မဟုတ်အစ်မရှိသူများသည်ရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ တစ်ဦးထက်ပိုမိသားစုဝင်ရောဂါရှိပါတယ်လျှင်အန္တရာယ်တိုး။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်မျိုးဗီဇအယ်လ်ဇိုင်းမားအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ကိုငါသိ၏။ စွန့်စားမှုမျိုးဗီဇများနှင့်တွက်ချက်ဗီဇ: ဗီဇနှစ်မျိုးနှစ်အမျိုးအစားများပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးရောဂါဖွံ့ဖြိုးရှိမရှိသြဇာလွှမ်းမိုး။
ဦးခေါင်းဒဏ်ရာများနှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်၏အနာဂတ်အန္တရာယ်ကြားက link တစ်ခုရှိပါသည်။ သင့်ဦးနှောက်အားကစားမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ဦးထုပ်ဝတ်ဆင်ထား, သင့်ထိုင်ခုံခါးပတ် buckling အားဖြင့်ကာကွယ်ပါ, နှင့် "ကျဆုံးခြင်း-proofing" သင့်အိမ်။
အင်အားအကောင်းဆုံးအထောက်အထားအချို့ကနှလုံးကျန်းမာရေးကိုဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကိုချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ ဦးနှောက်သွေးကြောများ၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးကွန်ရက်များထဲကတစ်ခုခြင်းဖြင့်မွေးမြူထားသောကြောင့်ဤဆက်သွယ်မှု, သဘာဝကျပါတယ်, နှင့်နှလုံးဦးနှောက်ဤသွေးကြောမှတစ်ဆင့်အသှေးကိုချပေးဘို့တာဝန်ရှိသည်။
ယနေ့အယ်လ်ဇိုင်းမားပြီးတော့ biomedical သုတေသန၏ရှေ့တန်းမှမှာဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသီများကအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်တတ်နိုင်သမျှသည်အခြားစိတ်ဖောက်ပြန်၏အဖြစ်အများအပြားရှုထောင့်လှန်ဖို့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ အများဆုံးထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှု၏အချို့အယ်လ်ဇိုင်းမားရဲ့ဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုမည်သို့အလင်းကိုသွန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါမျှော်လင့်ချက်သစ်ကိုကုသဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်ဒီပိုကောင်းနားလည်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကအလားအလာချဉ်းကပ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင်လက်ရှိဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါဟင်းအမွှေးအကြိုင်နနွင်းကနေ fisetin, သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များထံမှဆင်းသက်လာသဘာဝထုတ်ကုန်များနှင့် curcumin: Salk ရဲ့ဆယ်လူလာ Neurobiology ဓာတ်ခွဲခန်းဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများသရုပ်ပြပြီအပင်များတွင်တွေ့ရှိရနှစ်ခုဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအထဲကနေ, အဖွဲ့သုံးဖန်တီး အေဒီမူးယစ်ဆေးဝါး အိုမင်းဦးနှောက်နှင့်ဆက်စပ်မျိုးစုံအဆိပ်သင့်ခြင်းမှအာရုံခံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အပေါ်မှာအခြေခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်း CMS121 အဖြစ်လူသိများဤသုံးပါးဒြပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (CAD31 ကြောင်းပြ J147), အဖြစ်ကောင်းစွာ fisetin နှင့် curcumin သကဲ့သို့, မော်လီကျူးအိုမင်း၏အမှတ်အသားများအဖြစ်နှောက်လျှော့ချနှင့်ကြွက်သို့မဟုတ်ယင်ကောင်များ၏ပျမ်းမျှသက်တမ်းတိုးချဲ့။
အရေးကြီးတာက, အုပ်စုသည်ဤအေဒီမူးယစ်ဆေးကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားဖြင့်စေ့စပ်မော်လီကျူးလမ်းကြောင်းအများအပြားတိရိစ္ဆာန်များ၏သက်တမ်းတိုးချဲ့ဖို့လူသိများကြသည်နှစ်ခုသည်အခြားကောင်းစွာသုတေသနပြုဒြပ်ပေါင်းများကိုကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သူတို့၏ယခင်လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီး, အဖွဲ့အားလုံး geroneuroprotectors ဖြစ်ခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်တွေ့ဆုံရန် fisetin, curcumin နှင့်သုံးအေဒီမူးယစ်ဆေးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကပြောပါတယ်။
အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာတခြားလေ့လာမှုသည်ဤဓာတုဒြပ်ပေါင်းဟာဦးနှောက်၏အပြင်ဘက်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ကြသည်။ "ဒီဆေးတွေထိုကဲ့သို့သောကျောက်ကပ် function ကိုနှင့်ယေဘုယျကြွက်သားကျန်းမာရေးထိန်းသိမ်းကဲ့သို့သောအခြားခန္ဓာကိုယ်စနစ်တွေများအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်, ရှိပါကသူတို့အိုမင်းများ၏ရောဂါများကိုကုသသို့မဟုတ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုနိုင်," Schubert ကပြောပါတယ်။
- အယ်လ်ဇိုင်းမားမူးယစ် (အေဒီမူးယစ်) ကိုယ်စားလှယ်လောင်း: J147
Curcuminအိန္ဒိယဟင်းအမွှေးအကြိုင်နနွင်း၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း, ရောင်ရမ်း, ros ထုတ်လုပ်မှု, amyloid အဆိပ်အတောက်များနှင့် excitotoxicity လျော့နည်းစေနှင့်အေဒီ၏ကြွက်မော်ဒယ်များအတွက်အလွန်ထိရောက်သောသော multitarget ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် curcumin အလွန်နိမ့် neurotrophic လှုပ်ရှားမှု, ဆင်းရဲသော bioavailability, သူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်ဦးနှောက်ထိုးဖောက်မှုရှိပါတယ်။ curcumin ၏ neurotrophic လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တည်ငြိမ်မှုတိုးတက်လာဖို့ကျနော်တို့တစ်ချိန်တည်းမှာသူ့ရဲ့အာနိသင်နှင့်၎င်း၏ဇီဝလှုပ်ရှားမှုများရှုထောင့်တိုးပွားလာနေစဉ် pharmacological ဂုဏ်သတ္တိများတိုးတက်စေရန် SAR တွင်မောင်းနှင်ကြားမှာဓာတုဗေဒကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အစပိုင်းမှာ curcumin များ၏အလွန်အမင်း labile diketo system ကို curcumin ကျော်တိုးတက်လာသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ, CNB-001 စေရန်တစ်ဦး pyrazole မှပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ CNB-001 သုံးခု phenyl ကွင်းပေါ်အုပ်စုများ၏စနစ်တကျတူးဖော်သည့်ဟိုက်ဒအုပ်စုများခုနစ်ပါးကိုစိစစ် assay အတွက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်လိုအပ်သောမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုထင်ရှား။ အဆိုပါ pyrazole ပူးတွဲ phenyl လက်စွပ်နှစ် methyl အုပ်စုများ၏ထို့အပြင် CNB-023 ကျော်တိုးတက်လာသောအာနိသင်နှင့်အတူ CNB-001 မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော် CNB-023 (cLogP = 7.66) အလွန်အမင်း lipophilic ဖြစ်ပါသည်, နှင့်မြင့်မားသော lipophilicity နှင့်အတူဒြပ်ပေါင်းများမျိုးစုံ liabilities ရှိသည်။ အဆိုပါ lipophilicity လျှော့ချခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အနည်းငယ်မျှသာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့, နှစ်ခု cinnamyl အုပ်စုများ၏တဦးတည်းဖယ်ရှားခဲ့သည်, နောက်ထပ် optimization အနေနဲ့အလွန်အမင်းအစွမ်းထက်သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးမှဦးဆောင် J147။ curcumin ဆို assay အတွက်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမလှုပ်ရှားမှုရှိပါတယ်စဉ် J147, CNB-5 အဖြစ်စိစစ် assay ၏ပေါင်း 10-001 ဆပိုမိုအစွမ်းထက်သည်။ J147 သာအလွန်အမင်းအစွမ်းထက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်လည်းဒါဟာကောင်းသောရူပဂုဏ်သတ္တိများ (မီဂါဝပ် = 350, cLogP = 4.5, tPSA = 42) ရှိပါတယ်။ J147 (1146963-51-0) ကထူးချွန်ကုထုံးထိရောက်မှုရှိပါတယ်ရှိရာသာမန်သက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ AD မော်ဒယ်များအတွက်ကျယ်ပြန့်လေ့လာခဲ့ပြီ။
J147 အလားအလာကင်ဆာဖြစ်ကြောင်းမွှေးကြိုင် Amin / hydrazines မှပျက်ဆီးဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်ပါဘူးတစ်စုံတစ်ယောက်စိုးရိမ်ပူပန်မှု။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့, J147 များ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်တည်ငြိမ်မှု mouse ကိုပလာစမာ၌၎င်း, Vivo အတွက် microsomes အတွက်ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြသခဲ့သည် J147 (1146963-51-0) ကငြမ်းအတော်လေးတည်ငြိမ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လူသား mouse ကို, ကြွက်, မျောက်နှင့်ခွေးကိုအသည်း microsomes အတွက်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခု oxidative metabolites မှပြုပြင်မွမ်းမံကြောင်း, မွှေးကြိုင် Amin သို့မဟုတ် hydrazines မှယုတျညံ့မဟုတ်ပါဘူး။ ဤအ metabolites များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆနျးစစျဖို့, ငါတို့ရှိသမျှသည်သုံးလူ့အသည်း microsomal metabolites ဖန်တီးနှင့်အာရုံကြော assay အတွက်ဇီဝလှုပ်ရှားမှုအဘို့ထိုသူတို့ assayed ပါပြီ။ ဤအ metabolites အဘယ်သူအားမျှအဆိပ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထို metabolites အများအပြား J147 ၏သူတို့အားအလားတူဇီဝလှုပ်ရှားမှုများရှိသည်။
- အယ်လ်ဇိုင်းမားမူးယစ် (အေဒီမူးယစ်) ကိုယ်စားလှယ်လောင်း: CMS121
CMS121 ၏ဆင်းသက်လာဖြစ်ပါသည် fisetin။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကျော်ကျနော်တို့ flavonoid fisetin CNS မမှန်အတော်ကြာတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်နှုတ်, တက်ကြွအာရုံကြောများနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုး-တိုးမြှင့်မော်လီကျူးကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ Fisetin တိုက်ရိုက်ဓါတ်တိုးလှုပ်ရှားမှုရှိပြီးစိတ်ဖိစီးမှုကိုအောက်မှာ GSH ၏ intracellular အဆင့်ဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, fisetin neurotrophic နဲ့ anti-inflammatory လှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုလုံးရှိပါတယ်။ လုပ်ရပ်တွေကိုဒီကျယ်ပြန့် fisetin မျိုးစုံမမှန်နဲ့ဆက်စပ်အာရုံကြော function ကို၏ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သို့သော်ဆဲလ်အခြေစိုက် assay (50-2 μM), အနိမ့် lipophilicity (cLogP 5) အတွက်၎င်း၏အတော်လေးမြင့်မားတဲ့ EC1.24 မြင့်မား tPSA (107), သူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည် bioavailability တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက် fisetin ကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါစိန်ခေါ်မှု, 400, cLogP ≤ 5, tPSA ≤ 90, HBD ≤3≤အောင်မြင်သော CNS မူးယစ်ဆေးဝါးများ (မော်လီကျူးအလေးချိန်သူတို့နှင့်အတူပိုပြီးတသမတ်တည်းဖြစ်ဖို့တစ်ချိန်တည်းမှာယင်း၏ရူပဂုဏ်သတ္တိများပြောင်းလဲနေချိန်တွင်မျိုးစုံအာရုံကြောလမ်းကြောင်းအတွက် fisetin များ၏အာနိသင်ကိုတိုးတက်စေရန်ခဲ့ HBA ≤ 7) ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှု fisetin တိုးတက်စေရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် .Two ။ ပထမဦးဆုံးမှာကွဲပြားခြားနားသောဟိုက်ဒအုပ်စုများဖြစ်နိုင်သော sulfate / glucuronidate metabolites ဖယ်ရှားပစ်ရန်စနစ်တကျထုံးစံ၌ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ multitarget မူးယစ်ဆေးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုချဉ်းကပ် fisetin.Utilizing ၏သော့ချက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒြပ်စင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတစ်ချိန်တည်းမှာကျနော်တို့အာရုံကြော oxytosis နှင့်၌အလွန်တိုးမြှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူအနကျအဓိပ်ပါယျ၏နံပါတ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြစဉ်ကဒုတိယချဉ်းကပ်ထဲမှာ, flavone ငြမ်းတစ် quinoline ပြောင်းလဲခဲ့သည် ischemia assay စသည်တို့။ fisetin သုံးခုထပ်တိုးလှုပ်ရှားမှုများ, GSH များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပါအဝင်အနကျအဓိပ်ပါယျအတွက်ဘက်တီးရီးယား lipopolysaccharide ၏တားစီး (LPS) သွေးဆောင် microglial activation နှင့် PC12 ဆဲလ်အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားခြင်း, neurotrophic လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအတိုင်းအတာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ Flavone ဆင်းသက်လာသည် CMS-140 နှင့် quinolone ဆင်းသက်လာသည် CMS-121 အဆိုပါ physiochemical နှစ်ဦးစလုံးတိုးတက်အောင်စဉ်ထို့ကြောင့်က polyphenolic ၏ multitarget အရည်အသွေးတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ischemia assay (ပုံထဲမှာ fisetin ထက်အသီးသီးပိုမိုအစွမ်းထက် 600 နှင့် 400 ကြိမ်ဖြစ်ကြပြီး ဝင်း၏ pharmacological ဂုဏ်သတ္တိများ။
- အယ်လ်ဇိုင်းမားမူးယစ် (အေဒီမူးယစ်) ကိုယ်စားလှယ်လောင်း: CAD31
CAD31 ၏မျိုးစုံဇီဝကမ္မဆိုးကျိုးများအားလုံးသည်အသက်ကြီး-ဆက်စပ် neurodegenerative ရောဂါများအတွက်အဆိပ်ဖြစ်ရပ်များအချို့ကိုတားဆီးများ၏အခြေအနေတွင်အဆင်သင့်ရှိကြ၏။
CAD31 လူ့သန္ဓေသားပင်မဆဲလ်-ဆင်းသက်လာအာရုံကြောရှေ့ပြေးဆဲလ်များပွားအဖြစ် APPswe / PS1ΔE9အေဒီကြွက်တွေအတွက်လှုံ့ဆော်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်၏အခြေခံပေါ်မှာရွေးချယ်တဲ့အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ (အေဒီ) မူးယစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးခန်းဆီသို့ CAD-31 ရွှေ့ဖို့, စမ်းသပ်ချက်က၎င်း၏အာရုံကြောနှင့် pharmacological ဂုဏ်သတ္တိများဆုံးဖြတ်ရန်အဖြစ်အေဒီတစ်တိကျခိုင်မာစွာ mouse ကိုမော်ဒယ်အတွက်၎င်း၏ကုထုံးထိရောက်မှု assay မှဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
CAD31 ဟောင်းဦးနှောက်ထဲမှာလေ့လာတွေ့ရှိအဆိပ်တုကြောင့်ခြောက်လကွဲပြားအာရုံကြောဆဲလ် assay အတွက်အစွမ်းထက်အာရုံကြောသတ္တိလည်းရှိတယ်။ Pharmacological နှင့်ပဏာမ toxicological လေ့လာမှုများ CAD31 ဦးနှောက်-ထိုးဖောက်မှုများနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အန္တရာယ်ကင်းကြောင်းပြသပါ။ ရောဂါ၏ကုထုံးမော်ဒယ်အတွက် 1 အပိုဆောင်းလကြာအသက်9လအတွင်းမှာစတင်အသက်လက်ခဏာ APPswe / PS10ΔE3အေဒီကြွက်မှကျွေးမွေးသည့်အခါ, တစ်ဦးဟာမှတ်ဉာဏ်လိုငွေပြမှုအတွက်လျှော့ချရေးနှင့်ဦးနှောက်ရောင်ရမ်းခြင်းအဖြစ်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတစ်ခုတိုးရှိခဲ့ Synaptic ပရိုတိန်း။ ဦးနှောက်နှင့်သွေးရည်ကြည်ထဲကနေအသေးစား-မော်လီကျူးဇီဝဖြစ်စဉ်ဒေတာ CAD-31 ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်ဖက်တီးအက်ဆစ်ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းအပေါ်ဗဟိုပြုကြောင်းပြသခဲ့သည်။ မျိုးဗီဇစကားရပ်အချက်အလက်များ၏လမ်းကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ CAD-31 synapses ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်အေဒီစွမ်းအင်ကိုဇီဝဖြစ်စဉ်လမ်းကြောင်းအပေါ်အဓိကသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
သုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်ယခုအခါလူ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေသို့နှစ်ခု GNPs ရတဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ အဆိုပါ fisetin ဆင်းသက်လာ, CMS121, လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ရန် FDA ကခွင့်ပြုချက်လိုအပ်တိရစ္ဆာန်ဝိသဗေဒလေ့လာမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ curcumin ဆင်းသက်လာ, J147စောစောလာမည့်နှစ်တွင်အေဒီများအတွက်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ရန်စရိတ်များအတွက် FDA ကပြန်လည်သုံးသပ်အောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအုပ်စုသည်အလားအလာရှိသော geroprotective effects.The စုံစမ်းစစ်ဆေးသည်ဤအေဒီမူးယစ်ဆေးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသူတို့နောက်ထပ်ဖော်ထုတ်များအတွက်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်နည်းလမ်းအဖြစ်တီထွင်ထားသောမူးယစ်ဆေးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမော်ဒယ် validates သည်ဟုဆို assay ဖို့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေသို့အိုမင်းဘို့ထဲကဓာတုပစ်စညျးအမှတ်အသားများထည့်သွင်းဖို့စီစဉ်ထား GNP ဒြပ်ပေါင်းများ ကြောင်းကျန်းမာအိုမင်းမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ ဤသည်ကိုအလွန်အဘယ်သူမျှမကုသလက်ရှိတွင်ရှိပါတယ်ရသောအဘို့အိုမင်းများ၏ရောဂါများကုသရန်ဆေးဝါးများပိုက်လိုင်းအရှိန်အဟုန်မြှင့်နိုင်ဘူး။
4689 Views စာ
Megestrol acetate အမှုန့်အဘို့အဆုံးပြီးပြည့်စုံသောနိဒါန်း	Levonorgestrel: ကအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်လိုအသုံးပြုမှု, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး